Nge ukukhululwa kwe-operating system Windows 7, eziningi, abasebenzisi ibhekene yokuthi lalibukeka abanye inkonzo Idrayivu Yobhalomfihlo engaqondakali. Kuyini Idrayivu Yobhalomfihlo, abaningi Akekho owaziyo. Ake sizame ukucacisa isimo izibonelo ezithile. Endleleni, sibheke izinkinga eziphathelene ngokwezinga kuba ukuzibandakanya esifanele ingxenye noma ukuvala shaqa okuphelele.
Idrayivu Yobhalomfihlo i-: Kuyini Idrayivu Yobhalomfihlo, kungani le sevisi
Uma uqonde, Idrayivu Yobhalomfihlo iyindlela okudingeka bashintshashintshe ngayo futhi ngokuzenzakalela ngoba ekufihleni idatha egcinwe hard drive. Kuyini Idrayivu Yobhalomfihlo i drive kanzima? Imane nje inkonzo okungekho kokungenela komsebenzisi ukuvikela amafayela namafolda ngokubhala ngekhodi kubo bese udala ukhiye umbhalo ekhethekile enikeza ukufinyelela imibhalo.
Uma umsebenzisi usebenza ohlelweni ngaphansi kwe-akhawunti yakho, ngeke ngisho ukuqagela ukuthi idatha ibethelwe, ngoba ulwazi uboniswa ngendlela efundekayo, kanye nokufinyelela amafayela namafolda is akazange avimbelwe. Ngamanye amazwi, lokhu izindlela zokuvikeleka senzelwe kuphela kulabo izimo lapho computer senziwa ukufinyelela okungagunyaziwe, isib, uma uzama nokugxambukela ngaphandle (internet) ukuhlaselwa.
amaphasiwedi Imibuzo indlela yokubhala efihla incazelo
Nokho, uma sikhuluma ngalokho a Idrayivu Yobhalomfihlo i-Windows 7 noma izinhlelo ibencono, kuyafaneleka, kanye Iqiniso elibuhlungu ukuthi abaningi nick akuyona into Awukwazi ukungena ngemvume ku-Google, kodwa futhi enze izenzo ezithile phezu umbono nokulahlekelwa uvo iphasiwedi imibhalo etholakalayo ngaphambili, ikhophi, ukuthutha, nokunye. d.
Kodwa akugcini lapho. Uma ukubhekana umbuzo lokho Idrayivu Yobhalomfihlo i-Windows 8 noma 10, bese kunomehluko omncane, ngaphandle ukuthi zingabantu ubuchwepheshe okuthuthukile cryptographic. Kukhona ngokucacile inkinga kwenye. Iqiniso lokuthi isevisi uqobo uyakwazi ezisebenza izindlela ezimbili, ukugcina okhiye ukuqaqwa noma kwi-hard drive yakho noma esikhiphekayo ye-USB drive.
Lokhu kusikisela isiphetho elula: uma kukhona kugcinwa kwi-hard drive ukhiye wakho umsebenzisi uthola ukufinyelela wonke ulwazi olugcinwe kwi-ke ngaphandle kwezinkinga. Kodwa lapho ukhiye egcinwe flash drive, inkinga sisibi kakhulu. I disk ngekhodi noma ukwahlukanisa ukubona, isimiso, kungenzeka, kodwa ukufunda ulwazi - nganoma iyiphi indlela.
Ngaphezu kwalokho, uma wenza bese uyatjho kobana i-izinhlelo Idrayivu Yobhalomfihlo i-Windows 10 noma izinguqulo ngaphambili, akunakwenzeka ukuba wazi yokuthi isevisi okuhlanganiswe ngayo imenyu yengqikithi kwanoma yiluphi uhlobo kubangelwa ngokucindezela kwesokudla ukuthi abantu abaningi nje ecasulayo. Kodwa ake awutholi kuqala kunathi, futhi ucabangele zonke izici ezihlobene nomsebenzi we ngxenye eyinhloko futhi abheke ukuthi kungenzeka kwesicelo yayo noma uvale it.
Izindlela disk ukubethela kanye nabezindaba esikhiphekayo
Into abangaziwa ukuthi izinhlelo ezahlukene kanye zabo zenkonzo ukulungiswa Idrayivu Yobhalomfihlo kungaba okuzenzakalelayo, kanye imodi yekwentiwa. I 'eziyisikhombisa "inikwe amandla ngokwakhona, ekhulwini lesishiyagalombili futhi inguqulo yeshumi ngezinye izikhathi kudingeka operation manual.
Njengoba for ukubethela, ayikho into entsha ngempela belilokhu yasungulwa. Ngokuvamile esetshenziswa iyona AES ubuchwepheshe obufanayo esekelwe ukhiye womphakathi ukuthi avame ukusetshenziswa kumanethiwekhi yenkampani. Ngakho-ke, uma ukugcina ikhompyutha yakho nge ezifanele yesistimu yokusebenza ebhodini ixhunywe LAN, ungaqiniseka ukuthi ukuphoqelela ukuvikeleka nokuvikela idatha kuhilela ukusebenza isevisi. Hhayi abanamalungelo umlawuli (ngisho noma ukuqala ekushintsheni izilungiselelo kusukela umlawuli), awukwazi ukushintsha noma yini.
Ukuvula Idrayivu Yobhalomfihlo, uma inkonzo kukhutshaziwe
Ngaphambi kokuphendula lo mbuzo ezihlobene Idrayivu Yobhalomfihlo (indlela ukucima amasevisi, indlela ukususa imiyalo yayo kusukela kumenyu yokuqukethwe), sibheke ukufakwa kanye ukucushwa, ikakhulukazi ngenxa izinyathelo ukungaqaliswa kudingeka kwenziwe ukuze reverse.
Ukunika amandla ukubethela indlela elula Yenziwe "Control Panel" ngokukhetha ukubethela disk ukwahlukanisa. Le ndlela isebenza kuphela uma ukulondoloza ukhiye kufanele kwenziwe phezu medium esikhiphekayo.
Esimweni lapho abezindaba ze-non-esikhiphekayo ivinjelwe, kubalulekile ukuthola empendulweni yomunye umbuzo mayelana Idrayivu Yobhalomfihlo i service: indlela ukuvala induku le ngxenye? Kuyinto elula ngokwanele.
Kuncike ekutheni ukhiye ingabe ku konemimoya esikhiphekayo ukuqhaqha amadiski kanye disk ngodonga kuzomele uqale ufaka bayifaka port ezifanele (isixhumi), bese uqhubekela phambili ohlelweni ukuphepha "Control Panel." Ngemva kwalokho, sithola into Idrayivu Yobhalomfihlo ukubethela, bese sibheke ngemoto kanye nabezindaba lapho ivikelwe. Ezansi sizobonisa ukubethela off the oxhumano, futhi lapho kufanele cindezela. inqubo ukuqaqwa icushiwe lapho ukhiye ukuqashelwa isimo. It kuphela uhlala ukulinda ukuphela abulawe yayo.
Isici Izinkinga Ukucushwa Cypher
Ngokuqondene kulungiselelwa ke ngaphandle ikhanda ongakwazi ukuzenza. Okokuqala, uhlelo linikeza agcinele okungenani 1.5 GB ukuze uvumelane nezidingo zakho. Okwesibili, kudingeka ulungiselele uhlelo ifayela NTFS izimvume, sinciphise ubukhulu ivolumu, nokunye. D. Ukubhekana nezinto ezinjalo kungcono ukukhubaza ingxenye ngokushesha, ngoba abasebenzisi iningi umane akudingeki-ke. Ngisho bonke labo babe le sevisi zadeystovana izilungiselelo ezizenzakalelayo musa njalo bazi ukuthi yini okumele uyenze, noma kubalulekile ngaso sonke. Futhi ukuzonda ngesizathu esihle. Vikela idatha kukhompyutha wendawo, ungakwazi ukuyisebenzisa ngisho nalapho engekho anti-virus software.
Idrayivu Yobhalomfihlo i-: indlela ukukhubaza. Esigabeni sokuqala
Nalapha futhi, sisebenzisa iphuzu ngaphambilini licaciswe ku "Control Panel." Kuye ukuguqulwa igama sevisi izinkambu uhlelo kungashintshwa. I disk akhethiwe kungenzeka umucu ukumiswa sokuvikeleka noma zithinta ngqo Idrayivu Yobhalomfihlo i off.
Akuyona iphuzu. Kuwufanele benaka yokuthi isidingo ukukhubaza ngokuphelele BIOS buyekeza futhi ukuqalisa amafayela uhlelo kukhompyutha. Kungenjalo, inqubo ukuqaqwa kungathatha isikhathi eside.
Lokhu kumane nje kuyingxenye yomthwalo indaba ehambisana ne-service Idrayivu Yobhalomfihlo. Uyini Idrayivu Yobhalomfihlo, cishe ecacile kakade. Kodwa ohlangothini flip futhi ukwehlukanisa imenyu eyengeziwe ku khona kwalezi izixhumanisi le sevisi.
Ukuze wenze lokhu, bheka futhi Idrayivu Yobhalomfihlo. Indlela ukususa kusuka kwimenyu yokuqukethwe , zonke izinkomba isevisi? Elementary! Esikhathini "Explorer" ekwabiweni ifayela oyifunayo noma ifolda usebenzisa iphrofayli inkonzo bese uhlela lunikeza kwimenyu pop-up, iya kuzilungiselelo, bese usebenzisa imiyalo ukumisa kanye oda kubo.
Okulandelayo, ucacise inani le "Control Panel", ukuthola uhlu izakhi ezifanele panel nemiyalo, ukhethe umyalo oyifunayo, bese nje uyisuse.
Ngemva kwalokho, ngo-Registry Umhleli, faka legatsha HKCR, lapho sithola ROOTDirectoryShell kwesigaba, Vula sisuse lento oyifunayo ngokucindezela ikhi Del noma asuswe chofoza kwesokudla imenyu umyalo. Empeleni, yilokho yinto yokugcina kuziwa Idrayivu Yobhalomfihlo ingxenye. Indlela uyicime, ngiyacabanga, kucacile. Kodwa akufanele badukise thina. Noma kunjalo, le nsiza kuzodlondlobalisa ukugijima ngemuva (uma kwenzeka nje), ngabe ufuna lokho noma cha.
It uhlala ukuze ungeze ukuthi akusiwona wonke ukuthi kungathiwani uhlelo Idrayivu Yobhalomfihlo ukubethela ingxenye. Uyini Idrayivu Yobhalomfihlo, esiphethweni kanjani ukuze uyicime futhi asuse imiyalo imenyu - kanye. Umbuzo uwukuthi ukuthi kubalulekile ukuba cisha Idrayivu Yobhalomfihlo? Lapha singakwazi kuphela ukunikeza omunye yisiyalo: e-LAN yenkampani ukwenza kungasebenzi lesi sici akudingekile neze. Kodwa uma kuba ikhompyutha esigungwini ekhaya, futhi ngani?
Indlela yokwenza imenyu iqembu e VK: wiki yomdwebo
Inhloko igula lapho ukhulelwa. Yini okufanele ngiyenze?